Ihe ọhụrụ Xiaomi Mi MIX 2 bụ onye ọrụ ma bụrụ onye dị njikere iguzo na ọkọlọtọ ọ bụla n'ahịa | Akụkọ akụrụngwa
Taa bụ ụbọchị nke ọtụtụ n'ime anyị kara akara na kalenda ebe ọ bụ na Xiaomi akpọwo ndị mgbasa ozi na ihe omume, ebe onye bụ isi bụ Xiaomi Mi Mix 2, mbipụta nke abụọ nke smartphone na-enweghị mgbagha, bụ nke izizi mbụ dọtara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ma karịa atụmanya niile nke ndị nrụpụta China.
Mi MIX 2 a ahapụbeghị onye ọ bụla n'ọnụ ya, ebe ọ bụ na anyị niile maara na ihuenyo ahụ agaghị enwe ọnụ ma na nkọwa ahụ ga-apụta ìhè, mana ọbụlagodi na ihe niile ọ jisiri ike iju anya site na atụmatụ ọhụrụ etinyere na ọkachasị n'ihi ọtụtụ anyị na-atụ egwu na ọ ga-enwe ike iguzogide ọkọlọtọ ọ bụla dị ugbu a na ahịa na ndị na-abịa.
1 Njirimara na nkọwa nke Xiaomi Mi MIX 2
2 Ihuenyo bụ ọzọ mma
3 Igwefoto, na-enweghị ịbụ okpukpu abụọ, ga-enwe ọtụtụ ihe ikwu
Njirimara na nkọwa nke Xiaomi Mi MIX 2
Lee, anyị gosiri gị isi atụmatụ na nkọwapụta nke ọhụrụ Xiaomi Mi MIX 2;
Akụkụ: 151.8 x 75.5 x 7.7 mm
Arọ: gram 185
Ngosipụta: 5.99 sentimita asatọ na mkpebi nke 2.160 x 1.080 pikselụ
Ncheta RAM: 6GB
Nchekwa dị n'ime: 64/128/256 GB na ohere nke ịgbasa site na kaadị microSD
Igwefoto na-abịa: 12 megapixels nwere ihe mmetụta Sony IMX 386 na pikselụ pikselị nke 1.25 µm
Njikọta: Bluetooth 5.0, ọdụ ụgbọ mmiri infrared, ọdụ ụgbọ USB Type-C na ihe mmetụta mkpịsị aka
Sistemụ nrụọrụ: Android 7.1 Nougat na MIUI 9
Obi abụọ adịghị ya, na echiche nke njirimara na nkọwa ndị a, anyị nwere ike ịghọta na anyị na-eche ihu njedebe nke ahụ ga - abu akuku ahia a na - akpo ahia di elu. Ikekwe naanị akụkụ na-adịghị mma nke Xiaomi Mi MIX 2 a bụ sistemụ arụmọrụ ya, nke ahụ bụ na anyị na-achọta gam akporo 7.1 Nougat, mgbe ụbọchị ole na ole ọhụrụ gam akporo 8.0 Oreo dị na ahịa, ọ bụ ezie na ikekwe ndị na-emepụta China I nwere ike chere na ọ ka mma iji nwayọ nwayọ wee ghara itinye ihe egwu na sistemụ ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google, nke ugbu a enweghị ụdị MIUI emelitere.
Na vidiyo anyị gosipụtara gị n'okpuru ị nwere ike ịhụ otu ngosi nke ọhụrụ Xiaomi Mi MIX 2 na ngwaọrụ ndị ọzọ nke Xiaomi gosipụtara n'ihu ọha;
Ihuenyo bụ ọzọ mma
Obi abụọ adịghị ya, ihe kachasị mma banyere Xiaomi Mi MIX bụ nnukwu ihuenyo ya, na-enweghị ihe ọ bụla okpokolo agba ma dịka ọ na-enweghị ike ịbụ ụdị nke abụọ nke ama ama nke ndị China, ihuenyo ahụ bụ nnukwu mma. Na Igwe 5.99-inch nwere IPS teknụzụ ma jiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihu dum, na-ebelata okpokolo agba ma e jiri ya tụnyere nke mbụ na -eme ka ngụkọta nke ngwaọrụ ahụ dị ala karịa nke onye bu ya ụzọ.
Tụkwasị na nke a, ugbu a, nkuku nwere ihe a na-akpọpụta nke ọma na-enye ya ihe oyiyi na mmiri dị mma karị, na-enyekwa mmetụta nke nguzogide ka ukwuu, dịka ọmụmaatụ, ọdịda ma ọ bụ ịfụ ụfụ.
Igwefoto, na-enweghị ịbụ okpukpu abụọ, ga-enwe ọtụtụ ihe ikwu
Otu ihe dị ịtụnanya banyere Xiaomi Mi MIX 2 ọhụrụ a bụ na igwefoto ya abụghị okpukpu abụọ, na-agbaso usoro nke ihe ka ọtụtụ na ndị a na-akpọ njedebe dị elu na-eru ahịa. Ihe a bụ ọghọm doro anya, mana igwefoto kachasị nwere ogo dị ukwuu nke na anyị na-atụ egwu na ọ ga-enwe ọtụtụ ihe ikwu.
Dịka onye nrụpụta ndị China gosipụtara, igwefoto azụ na-arịgo a 386 megapixel Sony IMX 12 sensor na ngwa anya stabilization na pikselụ nha nke 1.25 µm. Ihe niile na-egosi, ọ bụ ezie na n'oge ahụ, ekwenyeghị na igwefoto nke MI MIX 2 bụ otu ihe ahụ anyị nwere ike ịhụ ma nwee obi ụtọ na Xiaomi Mi6.
Lee foto dị iche iche ejiri ngwa a nke ndị ọrụ gọọmentị Xiaomi bipụtara na Twitter;
N'oge ahụ Xiaomi ekwetabeghị ụbọchị akọwapụtara maka ọbịbịa n'ahịa nke Mi MIX 2 ọhụrụ a, mana ekwuputala ọnụ ahịa ọ ga-erute n'ahịa ndị China;
Xiaomi Mi Mix 64 GB + 6 GB: 3299 yuan (euro 425)
Xiaomi Mi Mix 128 GB + 6 GB: 3599 yuan (euro 460)
Xiaomi Mi Mix 256 GB + 6 GB: 3999 yuan (euro 510)
Xiaomi Mi MIX 128 GB + 8 GB seramiiki: 4699 yuan (euro 600)
Kedu ihe ị chere gbasara Xiaomi Mi MIX 2 ọhụrụ a na ọnụ ahịa a ga-ewepụta ya na ụbọchị ole na ole n'ahịa ndị China?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ihe ohuru nke Xiaomi Mi MIX 2 bu onye ochichi ma bia n’iru iguzogide ogwe aka obula na ahia